Topnepalnews.com | जापान आउँदै हुनुहुन्छ वा भर्खरै आउनुभएको ? छ यि कुरा सँधै ख्याल राख्नुहोला !
Posted on: June 10, 2016 | views: 1284
तपाई जापान आउँदै हुनुहुन्छ वा भर्खरै आउनुभएको छ भने तपाईलाई यि जानकारी सँधैको लागि उपयोगी र लाभदायक रहन सक्छ । जापान आएको धेरै समय भएकाहरुको हकमा भने व्यवहारत यस्ता कुरा जानेबुझ्ने हुने हुनाले यसले थप सहयोग मात्र गर्न सक्छ ।
नेपाली परिभेषमा हुर्केका हामीलाई नेपालमा गरेका बानी र व्यवहार अनि बोलीचालि र आनीबानी सामान्य लागेपनि जापानीहरु हाम्रा त्यस्ता बानीहरुलाई असजिलो मान्ने या भनौं रुचाउने गर्दैनन् । कम्तिमा पनि जापानमा रहँदा यहाँको बातावारणमा घुलमिल भएर रहनको लागि हामीले त्यस्ता बानीमा सुधार ल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।
जापानमा बोली चालीमा मात्र नभई तपाई कुनै ठाउँमा जाँदा यात्रामा, कुनै ठाउँमा प्रवेश गर्दा, कुनै कुरा खाँदा, प्रयोग गर्दा र हिँड्ने बेलामा समेत ख्याल गर्नैपर्ने हुन्छ । जसले तपाईलाई जापानीबिच घुलमिल हुन र काम गर्न सहज हुन्छ ।
- तपाई जापानीहरुसँग बोल्दै वा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो कुरा तपाई सुरुवातमा अभिवादन गर्न कहिल्यै नभुल्नुहोला । जापानीहरु भेट्दा वा छुट्दा हरेक पटक शिर नुहाएर अभिवादन गर्नेगर्दछन् ।
भेटमा खुशी साथ अभिवादन र छुट्दा मुस्कान सहित विदाई गर्ने जापानी संस्कार नै छ । जापानीहरु एकै दिन जति पटक भेटेपनि यो संस्कार लाई भुल्दैनन् ।
- तपाई कसैसँग कुरा गर्दैहुनुहुन्छ भने ध्यान अन्त नलैजानुहोला । नेपाली परिवेश वा अन्यत्र जस्तै जापानीहरुपनि कुराकानीका क्रममा आफुलाई वेवास्ता गरेजस्तो गरेर अन्य ध्यान दिएको कुरा नसुनेको लागेमा असहज महसुश गर्छन् । हरेक पटक बोलिरहेको कुरामा प्रतिक्रिया चाहन्छन् । त्यसैले एकजनासँग कुरा गर्दैहुनुहुन्छ भने उसलाई समय दिनुस् र कुरा गर्ने गर्नुस् ।
- तपाईलाई सहयोग गरेकोमा मात्र होइन तपाईले सहयोग नै गर्नुभएको छ भनेपनि भेटपछि छुट्दा धन्यवाद र अभिवादन छुटाउन हुन्न । साथै गरेको काम पुर्ण र त्रुटि रहित गर्ने जापानी विशेषता नै छ ।
कस्ता कुरा जापानीलाई मन पर्दैन वा कुरा गर्न चाहँदैनन् ।
संस्कारगत आधारमा सम्मान आदर गर्नेमा जापानीहरुको संस्कृती उच्च छ । तर उनिहरुभित्रको बारेमा पनि तपाईले बुझ्न थाल्नुभयो भने केही यस्ताकुराहरु छन् जसमा उनिहरु घमण्ड गर्छन् । केही कुरा तिरस्कार गर्छन् भने कति कुरा सुन्न र छलफल गर्नै रुचाउँदैनन् । त्यसैले यस्ता कुरामा जापानीहरुसँग कुरा वा छलफल सकेसम्म नगर्नुनै बेश हुन्छ ।
- हामीले निरंकुश राजतन्त्रलाई फालेको १ दशक पुगेको छ । संवैधानिक रहेपनि अधिकारको दुरुपयोग गर्दा पुस्तैनी शासन गर्ने राजतन्त्र फालेका हामीलाई जापानमा रहेको संवैधानिक राजतन्त्र र यसप्रतिको सम्मान अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो ।
तर जापानीबिच यो कुनै अचम्मको विषय छैन । राजपरिवारले देशको लागि निभाएको भुमिका, पदिय र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गरेका कामले यो संस्था जापानीबिच श्रद्धाको पद बनिरहेको छ ।
छिटफुट रुपमा राजनीति गर्ने एकाधलाई यो संस्थाबारे चित्त नबुझेपनि उनिहरुपनि राजसंस्थाको बारेमा बिरोध र आलोचना गर्दैनन् । त्यसमा पनि राजनीतिमा सचेत तर सक्रिय सहभागीता नजनाइरहने जापानीहरु राजसंस्थाको आलोचना वा यसलाई हटाउने जस्ता विषयमा कहिल्यै कसैसँग छलफल गर्दैनन । र यस्तो छलफललाई उनिहरु रुचाउँदैनन् । त्यसैले जापानी राजसंस्थाको बारेमा तपाई कुरागर्दै हुनुहुन्छ भने यस्ता कुरा बिचार गरेर मात्र आफ्ना कुरा राख्नुहोला ।
जापानीलाई कोरियन वा चाइनिज जस्तो नभन्नुस्
हामी आफैंपनि वर्णको आधारमा कसैले भारतीय जस्तो वा अन्य कुनै देशको जस्तो भन्यो भने रुचाउँदैनौं । त्यसको खण्डन गर्दै आफु नेपाली भएको गर्वका साथ बताउछौं ।
जापानीहरुमा पनि ठिक त्यस्तै बानी छ । उनीहरुलाई हेर्दा कोरियन वा चाइनिज जस्तो देखिएपनि झुक्किएर पनि ति देशको जस्तो नभन्नुहोला । बरु अन्य देशको जस्तो लागेपनि तपाई जापानी हो है । भन्दा यसले खासै असर पार्दैन । अन्य देशका भएपनि उनिहरुले बरु जापानीनै जस्तो देखेकोमा नराम्रो मान्दैनन् ।
तर ख्याल राख्नुस् अन्य देशको जस्तो लागेमा यस्ता कुरा नभनीहाल्नु्स । उनिहरुको बोलीको लवज, बसाई, गर्ने काम आदिका आधारमा कुन देशका हुन पहिचान गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा समस्यामा परिंदैन । त्यसैले अन्य देशका भएपनि भन्नै पर्ने अवस्थामा बाहेक तपाईले सामान्य अडकल काडेकै भरमा उनिहरुको देशबारे नबताउनुहोला । जसले गर्दा उनिहरुको भावनामा चोट लाग्दैन । जसरी नेपालीलाई तपाई भारतीय हो । हेर्दा भारतीय जस्तै देखिन्छ भन्दा हामी त्यसलाई रुचाउँदैनौं र आफ्नो बचाउ गर्छौं ।
यसमा जोड्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण कुरा भने जापानको ओकिनावा राज्यका नागरिकबारे छ । जहाँका जापानीहरु उनिहरुलाई अरुले ओकिनावा वासी भनेर संवोधन गरेको मन पराउँछन् । जापान भित्रको पनि ओकिनावा राज्यका भएपनि उनिहरुलाई जापानी भन्दा बढी ओकिनावावासी भनेको मनपर्छ ।
विवादास्पद भूमी, सेना र विश्वयुद्ध
शताब्दीऔंदेखी जापानसँग भियतनाम देखी ताईवान, कोरिया र मुख्य गरी चिनसँग सिमा र भूमि का विषयमा विवाद रहँदै आएको छ ।
हाल ताईवान, चीन र कोरियाबिच विवाद रहेको साउथ चाइना समुन्द्र क्षेत्र सँगै जापानको रसियासँगपनि विवाद रहेको छ । यद्यपी अन्य देशको तुलनामा जापान र चीनबिच समुन्द्री क्षेत्रमा रहेका साना टापुका विषयमा सताब्दिऔं देखी विवाद छ ।
२० औं अशाब्दि अघिसम्म जापानको एक कोलोनीको रुपमा रहेको कोरिया र दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा चीनमा जापानी सेनाले गरेको अपराध विश्वभर चर्चा र आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ । यद्यपी जापानीहरुसँग यस्ता विषयसँगै दोस्रो विश्वयुद्ध र जापानी भुमिका सहित हिरोसिमा नागासाकी दुखद घटना लगायत विषयमा तपाईले प्रशंग वेगर आफुले कहिल्यैपनि कुरा ननिकाल्नु वेश हुन्छ । किनभने यस्ता विषयमा जापानीहरु जिद्दि अनि एकोहोरो स्वभावका हुन्छन् भने उनिहरुका कुरामा शत प्रतिशत सहमत नभएमा तपाईमाथि नै उनिहरुले प्रश्न वा छुट्टै नजरले हेर्ने संभावना रहन्छ ।
संस्कृतिमा विविधता धर्ममा संकिर्णता
पश्चिमा जस्तै जापानीहरुपनि आफ्नो धर्मका बारेमा नेपाली व्यवहारको तुलना गर्दा केही संकिर्ण लाग्ने गर्छन् ।
जापानमा विभिन्न धर्महरु मनाउने गरेपनि बुद्ध धर्म र यसकै जापानी अवतार आदिलाई मानेर प्रकृति पुजा सँगै जापानीहरुले अनेकन धर्ममान्ने गर्छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा जस्तै जापानमा पनि नजानिंदो पाराले क्रिश्चियन धर्मको प्रचार र मान्नेहरुको संख्या केही बढेको पाइन्छ ।
धर्म मान्ने स्वतन्त्रता रहेको यहाँ जापानीबिच पनि एउटै धर्मभित्र पनि अनेकन धर्मगुरुको छुट्टा छुट्टै आस्थामा पछि लाग्ने कट्टर जापानीहरु यहाँ पाइन्छन् । एकले अर्को धर्म गुरुलाई नमान्ने र तिरस्कार गर्न समेत पछि नपर्ने जापानीसँग उनिहरुका धर्मका बारेमा चासो र जिज्ञासा राखेर जानकारी लिनु रोचक र उनिहरुले राम्रो मानेपनि त्यसबारेमा प्रतिप्रश्न र कारणहरु भने नखोतल्नु होला । जसले गर्दा बन्दै गरेको सम्वन्ध र मित्रतामा तगारो नआओस् ।
सामान प्रयोग गर्दा वा काम नियाल्दा
जापानीहरुको कुनै सामान प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सानो भन्दा सानो कुरा पनि नसोधिकन कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोला ।
मानौं मोबाइल फोनको चार्जर त्यसै रहिराखेको छ वा तपाईसँग चार्जर छ र चार्ज गर्ने ठाउँ देख्नु भएको छ भने पनि सोधेर मात्र गर्नुहोला । जापानीहरु अरुको कुनैपनि कुरा प्रयोग गर्दा अनुमति लिएर मात्र गर्छन् भने अभिवादन र धन्यवाद नियमीत जस्तै ।
रेष्टुरेण्ट होटल जस्ता सार्वजनिक ठाउँमा बाहेक अन्यत्र नसोधिकन कहिल्नै पस्नु हुँदैन । कसैले केही गरिरहेको छ भने चियाउने, एकोहोरो हेरिरहने जस्ता बानी कहिल्यै नगर्नुहोला ।
कुनै ठाउँ वा व्यक्तिको फोटो लिंदै हुनुहुन्छ भने सोधेर मात्र फोटो खिच्नु पर्दछ । कोहीपनि जापानीको तस्विर सामान्य लागेर कहिल्यै नलिनुहोला ।
घरमा बस्दा ठूलो स्वरले नबोल्ने, सरसफाइमा सँधै ध्यान दिने, कोठा, बिजुली, पानी आदिको पैसा समयमै तिर्ने आदि कुरा तपाईले कोठा लिएर बस्दा समयमै गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा हुन् । यस बाहेक कति बजेभित्र के कुरा गर्न पाइने भन्ने कुरा तपाई बसेको ठाउँ अनुसार फरक हुने हुनाले सामान्यतया राती १० बजेपछि र बिहान ८ बजेअघि आवाज आउनेगरि कोठामा कुनै काम, लुगाधुने मेसिन चलाउने, म्युजिक बजाउने, कराउने लगायतका काम कहिल्यै गर्नुहुँदैन ।
तपाई जहाँसुकै जाँदा पनि तपाईको व्यक्तिगत परिचय खुल्ने कार्डका साथै काम गर्ने अनुमति, विद्यार्थी, व्यापारिक वा पर्यटकीय भिषा तपाई के मा रहनुभएको छ बोक्नैपर्ने यस्ता कार्ड साथमा कहिल्यै छुटाउनु हुँदैन ।
कथंकदाचित पताई यि सबै कुरा रहेर पनि समस्या पर्नुभयो भने यसमा तपाईले भाषा जानेका व्यक्तिको सम्पर्क नम्वर साथमा राख्नुपर्छ । जसले तपाईलाई सहयोग पुग्नेछ । त्यसैले जापान आउँदै हुनुहुन्छ वा भर्खरै आउनुभएको छ भने तपाईले जापानी भाषा सिक्नैपर्ने हुन्छ । जसले तपाईलाई काम, यात्रा, जापानीबिच घुलमिल हुन मात्र होइन तपाईको प्रगतिमा समेत सहयोग गर्नेछ ।
यस बाहेक जापानमा रहँदा तपाईले नेपाली राजदूतावास, गैर आवासिय नेपाली संघ, चिनेजानेका व्यक्ति आवद्ध संस्था, पत्रकार लगायतको सम्पर्क नम्वर साथमा राख्नुभयो भने तपाईको जापान यात्रामा सँधै सहयोग पुग्नेछ ।